Nhau - Gonesa iyo Pazasi Nenzvimbo Optimization
Ongororo ichangoburwa yeHVS Eco Services Facility Optimisation yakacherekedza mari ingangochengetwa ye $ 1,053,726 pagore - kudzikiswa ne14% pamitengo yesimba yegore pasifodhi yemahotera ane gumi neshanu ebasa riri munzvimbo dzakasiyana siyana muUnited States.
Chishandiso chakasimba chekugadzirisa chinopa chinopa mahotera neresitorendi mamaneja masisitimu akakosha ekuita (KPIs) zvavanoda kuti vaite basa ravo nemazvo. Ongororo iyi inobvumira maneja vezvivakwa kuti vaite sarudzo dzinobudirira, dzinotungamirwa zvebhizinesi dzinova nemhedzisiro isinganetseki pamashandisirwo emagetsi uye tsoka dzekabhoni. Kuongorora hakungobvumidze vashandisi kuenzanisa mashandisirwo emagetsi musimba pane mamwe mahotera emahotera kuti vaone vanoita zvisirizvo, inoburitsawo zvikonzero zvekusaita zvakanaka, inopa nhungamiro yekugadzirisa zvikonzero izvi, uye nekuenzanisa mikana yekuchengetedza inoenderana nekugadzirisa zvikonzero zve kuita zvisirizvo. Pasina nhungamiro yakadaro, mamaneja ako ezvivakwa anofanirwa kushandisa yekuyedza uye yekukanganisa nzira, inova nzira isingashande yekuvandudza mashandiro ezvemamiriro ekunze pane imwe portfolio yemahotera kana maresitorendi. Sezvo ongororo yeHVS ichijekesa pachena mari inogona kuchengetwa iyo munhu yaanogona kugadzirisa nekugadzirisa mashandiro ekusaita zvakanaka, vanoshanda vanogona kuisa pamberi pekushandisa mari nekukurumidza kugadzirisa matambudziko anozounza zvakanyanya kukosha.
Yekubhadharisa data ndeyeiyo yekutanga sosi yesimba ruzivo iyo yainayo pane yavo portfolio yehotera. Nepo iyo data mumahotera 'ekushandisa mabhiri ari pokutangira kwechero yekuongorora kwekuita kwezvakatipoteredza, aya mareti data haatarise misiyano mune yega yega hotera hunhu hwakadai saizi, dhizaini, nzvimbo yemamiriro ekunze ekushanda, uye nhanho dzekugara dzakasiyana, kana ivo vanopa chero nhungamiro pane zvingangokonzeresa kusashanda zvakanaka. Nepo zvakadzama simba rekuongorora kana kupindirana kwekuisa mukati kunogona kubatsira kuona mikana yekuchengetedza, iwo anodhura uye anotora nguva kushandisa kune imwe portfolio yemahotera kana maresitorendi. Kupfuurirazve, kuongororwa hakuwanzo kuenzanisira kune ese akasarudzika maficha emahotera ako, zvichitadzisa kuongorora kwechokwadi kwe "maapuro nemaapuro". Iyo HVS Eco Services Facility Optimization chishandiso inzira inodhura yekushandura makomo edata rekushandisa kuita mugwagwa wekuziva kukosha kwekuchengetedza. Pamusoro pekuona kuchengetedzwa kunokosha kwekushandisa, chishandiso ichi inzira inodhura yekuwana zvikwereti kune zvitupa zveLEED neEcotel, nekuitisa kuyerwa uye manejimendi yekushandisa zvinoshandiswa.
Iko kuongorora kunosanganisa mamiriro-e-iyo-ehunyanzvi manhamba ekuongororwa kwekushandisa, mamiriro ekunze, uye data rekugara, uye ruzivo rwehunyanzvi rwemasystem emagetsi emahotera, uye neakasiyana mashandiro akaomarara emabasa ekugamuchira vaeni. Zvidimbu kubva ongororo ichangoburwa zvinopihwa pazasi.
Nyaya Yekudzidza Zvidimbu